सिक्किमको एसडीएफ पार्टी भाजपामा सामेली सन्दर्भ : एसडीएफलाई सिक्किमेली जनताले सदनमा विपक्षको रूपमा काम गर्न पठाएको हो::Milap News
13 अगस्त, 2019 को दिन एसडीएफले फेरि अर्को इतिहास कायम गरेको छ। एसडीएफका जम्मा 10 जना विधायकहरूले दिल्लीमा भाजपाका राष्ट्रिय महामन्त्री राम माधवको नेतृत्वमा आफूहरूलाई भाजपा सामेल गरेको घोषणा हुनसाथै सोसियल मीडियामा यो समाचार भाइरल हुनगयो। हामीले आजको दिनमा सिक्किम क्रोनिकलमार्फत् एसडीएफका सिनियर नेता डीटी लेप्चाले भनेका कुराहरू सुन्यौं। यसका साथै सिक्किम प्रदेशका भाजपा अध्यक्ष डीबी चौहानका कुराहरू पनि सुन्यौं ।
यसबाहेक अन्य पक्षहरू पनि जनतासामु आइरहेका छन् । आम मानिसहरूले एसडीएफ पार्टीका विधायकहरूले सिक्किमेली जनतालाई धोका दिएको प्रतिक्रिया गरिरहेका छन् । भाजपाका सिनियर नेता डीबी चौहानका शब्दहरूलाई मनन गर्दा के पाइन्छ भने चौहानले एसडीएफ विधायकहरूलाई भाजपामा स्वागत गर्न र दिल्लीका नेताहरूले गरेको कुराबाहेक उनको दह्रो प्रतिक्रिया देखिएन । हिजोसम्म एसडीएफ सरकार सत्तामा रहँदा राज्य भाजपाको तर्फबाट जतिको दह्रो प्रतिक्रिया आउँथ्यो अनि आज पनि मानिसहरूले सोही स्तरमा प्रतिक्रियाको आशा राखेका थिए अनि त्यो नपाउँदा उनीहरू निराश भएका कुराहरू उनीहरूले सोसियल मीडियामा राखेबाट बुझ्न सकिन्छ ।
अर्कोतिर सिक्किमका पूर्व मन्त्री तथा एसडीएफका एक शक्तिशाली नेता डीटी लेप्चाले एसडीएफ विधायकहरूको भाजपामा सामेलीलाई सिक्किमेली जनताको हितमा रहेको बताएका छन्। यसै गरी राजधानी गान्तोकस्थित एसडीएफको केन्द्रिय कार्यालयमा केही संवाददाताहरू यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिनजाँदा कोही पनि आज तयार थिएनन् तर भोलि घटना क्रमलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझेर सम्भवतः प्रेस कन्फरेन्स हुनसक्ने कुरा समाचारहरू सुनियो ।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा सिक्किमका एक शक्तिशाली नेता, सिक्किममा 25 वर्षसम्म आफ्नो नेतृत्वमा शासन गर्ने व्यक्ति, देश-विदेशसम्म सिक्किमको नामलाई मुखजवानी बनाउने, पूर्वाञ्चल भारतमै एक सबल नेताका रूपमा देखा परेका व्यक्ति, नेपाली साहित्य क्षेत्रमा भारतमै एक विख्यात नाम पवन चामलिङको नाम दृश्यबाट बाहिर छ। सायद यसैकारण धेरै मानिसहरूले खेलले लय पक्रेको हेर्न बाँकी नै छ भनेका होलान् ।
अब एकाध सायद धेरै पत्रकारहरूका मस्तिष्कमा होलान् । आम मानिसहरूका मनमा पनि प्रश्नहरू थुरिएकै होलान्। सबभन्दा पहिले त सिक्किममा एसडीएफ सरकार रहँदाताका अथवा चुनाउभन्दा अघिसम्म एसडीएफ पार्टीले भाजपासँग भित्री साँठगाँठ गरेको अफवाह मात्र फैलिँदा पनि एसडीएफले आफ्ना प्रवक्ताहरूमार्फत् सो अफवाहमाथि प्रतिक्रिया दिँदै एसडीएफ पार्टी सिक्किमेली जनताको पक्षमा खडा भएको पार्टी हो भन्नेहरू कुन बाध्यतावश भाजपामा सामेली हुनपुगे ?
अर्को प्रश्न-राष्ट्रको लोकसभा सदन होस् कि राज्यसभा सदन होस् त्यो कुनै पनि पार्टीको निम्ति हुँदैन । त्यहाँ सबै राष्ट्रियदेखि आञ्चलिक तथा क्षेत्रीय पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताका पक्षका कुराहरू राख्न पाउँछन् । त्यही ठाउँमा भएका विशेषता र मर्यादालाई आफ्नो दिमागमा राखेर आफूहरूले त्यहीँबाट न्याय पाउने आशा राख्दै आ-आफ्ना क्षेत्रबाट विधायक, सांसदहरूलाई आफ्नो विपुल मत दिएर पठाउने गर्छन्। त्यसरी नै अन्य राज्य सरह सिक्किमको विधानसभामा पनि सिक्किमेली जनताका पक्षका कुराहरू राख्ने र न्याय दिने ठाउँ हो। त्यहाँ एसडीएफ र एसकेएम पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बराबारको अधिकार रहेको हुन्छ। त्यही ठाउँबाट जनताले आफ्ना निम्ति न्याय पाउने आशा राखेका हुन्छन्। त्यसकारण एसडीएफ पार्टी नेता र पार्टीका अन्य प्रतिनिधिहरूले विधानसभा नपस्ने घोषणा गर्नु उचित थिएन कि? किनभने एसकेएम पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको पदको निम्ति नोमिनेट गरेर पी. एस. तामाङ (गोले) लाई विधानसभामा पठाइएको हो । गोलेले मुख्यमन्त्री पदमा बस्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् अथवा त्यसको प्रक्रिया के कस्तो छ ती कुराहरू खोज्ने र कानुनी सङ्घर्ष गर्ने क्षेत्र न्यायपालिका छ । त्यहाँ जान सकिन्थ्यो । त्यसैकारण सायद हामीले आम जनका मनका भाव तरङ्गहरू सोसियल मीडियाहरूमा देख्न पाइरहेका छौं ।
एसडीएफ पार्टीले आफ्नो कार्यकालभरि सिक्किममा विकास गरेन भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो बयान कि त गलत हो कि त उसले विकासको परिभाषा नबुझेको हुनसक्छ। पवन चामलिङको नेतृत्वमा सिक्किम विश्वका कुना-कुनासम्म पुगेकै हो। कार्य गर्ने केही प्रक्रियाहरू गलत भए होलान् त्यो एक हदसम्म सही हुनसक्छ तर वर्तमान एसकेएमको सरकार भर्खरै मात्र सिक्किममा भएको छ। हेर्न बाँकी नै छ उसले कार्य गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुनेछ ।
‘यता बाख्रा हराउनु उता चितुवा कराउनु’ भन्ने उखान जस्तै दार्जीलिङ लोकसभा समष्टिका संसद सदस्य राजु विष्टले आफ्नो क्षेत्रमा आएर दार्जीलिङलाई स्थायी राजनैतिक समाधान दिन भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध छ भनेको 24 घण्टा नबित्दै यता सिक्किमका एसडीएफका 10 जना विधायक भाजपामा सामेल हुनुलाई मानिसहरूले संशयको रूपमा हेरिरहेका छन्। जम्मू कश्मीरमा 370 धारा समाप्त भएपछि 35 ए पनि समाप्त भएको देख्दा सिक्किमेली जनतॉा पनि भयभीत हुनु स्वाभाविक हो। समय-समयमा एकीकरणका कुराहरूमाथि पनि आम मानिसहरूको चर्चा हुनु भनेकै उनीहरूभित्र त्रास उब्जेको मान्न सकिन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सिक्किम र जम्मू कश्मीरको परिदृश्य अलग अलग हो त्यसकारण यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग अलग नै हुनुपर्छ ।
यो विषय अझ झञ्जालयुक्त छ। यसपट्टिभन्दा सिक्किमकै सन्दर्भलाई अघि बढाउँदाके देखिन्छ भने बङ्गालको मार्क्सवादी पार्टीलाई पहिलो जनतासँग जोडिएको पार्टी भनिन्थ्यो भने दोस्रोमा एसडीएफ पार्टीलाई जनताले रुचाएको पार्टी भनिन्थ्यो। तर आज त्यस्तो के कारण पर्‍यो जुन विधायकहरू कम्तीमा दुई-चार महिना पनि विपक्षमा बस्न सकेनन्? भन्ने प्रश्नहरू साधारणभन्दा साधारण जनताले पनि गरिरहेका छन् ।
एसडीएफ पार्टीले आफ्नो कार्यकालमा सिक्किमेली जनतालाई सिक्किमकै आञ्चलिक पार्टी चाहिन्छ भनेकै हो। अनि, सिक्किमेली जनताले सिक्किम बाहिरका नेताहरूको पार्टीलाई सिक्किमको भविष्य सुम्पँदैनन् भन्ने गुड कुरा थाहा हुँदैहुँदै पनि आजको निर्णय कुन परिस्थितिमा लिइयो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार सिक्किमेली जनताले राख्न पाउँछन्। एसडीएफ नेता पवन चामलिङकै दिशा निर्देशमा 10 जना विधायकले आफूलाई भाजपामा सामेल गरेको कुरा पूर्व मन्त्री तथा वर्तमान एसडीएफ पार्टीका विधायक डीटी लेप्चाले बताएपछि अरू प्रश्न गर्ने ठाउँहरू बन्द भएका छन्। सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहान अस्पष्ट भावमा सिक्किममा भाजपाको शासन आउने कुरामा विश्वस्त छन्। उनले सोच्न पाउने अधिकार भारतको संविधानले दिएको छ। उनले मात्र किन अन्य राजनैतिक दल अनि नेताहरूले पनि आ-आफ्नो स्तरमा सोच्न पाउनेछन् । सर्वहिताय सर्वसुखायको नारा कुनै एक व्यक्तिका निम्ति मात्र होइन यो भारतका सम्पूर्ण नागरिकलाई अधिकार छ ।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा एसके एम पार्टीको सरकारले भविष्यमा के-कस्ता निर्णयहरू लिनेछ अनि त्यसको प्रतिक्रिया आम जनताले कुन स्तरमा दिनेछन् त्यसको उत्तर पनि समयले दिँदै जाला। जनताको निम्ति जनताद्वारा जनताका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले केेही ठोस निर्णयहरू लिँदा आफू जनताद्वारा उनीहरूका निम्ति चुनिएको हो भन्ने कुरा भुल्न हुन्न। यो भनाइलाई केवल एसडीएफ पार्टी वा उसका विधायकहरूका निम्ति मात्र नभएर समग्र पार्टी, नेता र पार्टी कार्यकर्ताका निम्ति पनि हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि पार्टीका निम्ति जनता सर्वेसर्वा हुन्। त्यसैकारण उनीहरूलाई जनता जनार्दन भनिएको हो, भगवान् भनिएको हो। कोही पनि चुनिन्छन् भने उनीहरू जनताका निम्ति चुनिएका हुन्, केही व्यक्तिहरूको सुविधाका निम्ति जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका होइनन् भन्ने कुरा सबै राजनैतिक पार्टीहरूले जान्न जरुरी छ।